Shiinaha Aluminium Jeegaanta Alwaaxa warshad iyo soosaarayaasha | Kaichuang
Shabakadda Aluminium waxaa sidoo kale loo yaqaannaa shaashadda aluminium. Waxay ka samaysan tahay aluminium aluminium ah. Hal dhinac oo dusha sare ah ayaa lagu dhejiyay qaab dheeman ah. Qaababka kala duwan ayaa loola qabsan karaa deegaanno kala duwan iyo adeegsiyo kala duwan. Nooca jeegga ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa sida saxanka taraafikada ee baahiyaha sagxadda ganacsiga iyo warshadaha, iyo sidoo kale gawaarida sida ambalaaska iyo gawaarida rashka.
Kaihua aluminium aluminium aluminium wax soo saarka aluminium, oo leh 5-Tread Tread Tread, Lentil-pattern-aluminium-plate, Pointer pattern aluminium noocyo kala duwan, saxan aluminium grid ayaa sidoo kale loo yaqaan saxanka tread, plate plate, plate plate, plate anti-skid, saxanka anti-taraarax, saxanka dheeman. Kani waa xaashi aluminium ah oo fidsan oo qaab ama xarriiq ah oo korka laga kiciyey si kor loogu qaado khilaafku loona yareeyo khatarta. Sibiibixan. Muraayada Aluminiumku waxay leedahay astaamo qurxoon oo wanaagsan waxaana loo isticmaalaa sida dabaqa wax lagu raro ama walxaha derbiga lagu qurxiyo. Waxa kale oo ay leedahay alxamid aad u wanaagsan iyo qaab qabow. Waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo isku-dhafan oo xoog badan oo xoogaa ka sarreeya 5251, xoog dhexdhexaad ah. Shabakadda Aluminiumku waxay ka fiican tahay miridhku u adkaysta oo ka fudud qalabka kale waxayna sii jiri kartaa sannado badan, iyadoo ilaalinaysa qiimaheeda sare ka dib beddelkeeda. Nooca jeegga noocan ah ayaa baahi ballaaran loogu qabaa sagxadda ganacsiga iyo warshadaha.
Qalabka Aluminiumku wuxuu leeyahay saameyn wanaagsan oo ka hortagga taraafikada, oo si ballaaran loogu isticmaalo qaboojiyaha, tareenka dhulka hoostiisa mara, kahortagga taraafikada baska, sagxadda gawaarida waaweyn ee gaadiidka iyo meelo kale. Marka labaad, shaashadda aluminium ee 5052 waxay leedahay waxqabad wanaagsan oo ka hortagga daxalka, aluminium jeegga waxaa loo isticmaalaa meelaha qoyan, meelaha u nugul u nuglaanta, sida qaboojiyaha, gaari qaboojiye, guddiga doonnida ka hortagga taraafikada, iwm. Waxay leedahay shaqo antioxidant cayiman maxaa yeelay ma yeeli doonto oksaydh ku samee taabashada muddada-dheer ee dareeraha. Xiriirka muddada-dheer ee dareeraha ah oksijiin ma sameyn doono, sidaas darteed waxay leedahay shaqo-ka-hortagga antioxidant cayiman. Muuqashadiisa lacagta awgeed, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa gaari-gacmeedka raashinka guurguura, taas oo aan ahayn kaliya silbasho, laakiin sidoo kale waxay siisaa muuqaal nadiif ah oo qurux badan macaamiisha.
Ii riix warshadda iyo macluumaadka baakadaha
Hore: 7075 XAASHKA ALUMINUM
Xiga: Dheeman aluminium jeeg jeeg
3mm qiimaha saxanka hubiyaha aluminium
5 bar saxan hubiyaha aluminium
saxanka hubiyaha aluminium
iibiyeyaasha saxanka hubiyaha
Shiinaha Checkered Aluminum Aluminium Warshadaha
Shiinaha Checkered Aluminium saxan Warshad
Shiinaha Checkered Aluminium saxanka soo saaraha
Dheeman aluminium jeeg jeeg
Saxan aluminium daawaha ah oo dusha ka jeexaya
5754 H114 TAARIIKHDA ALUMINUM LOO BAAHAN YAHAY
Alaab-qeybiyeyaasha Birta ah ee Anodized Aluminium, qiimaha aluminium jeeg jeeg, daawaha aluminium 6061 qiimaha, 7050 sheet aluminium, Tread Tread Aluminum Aluminium, Waraaqaha Aluminium ee jaban,